‘अधिनायकवाद स्याल हुइँया हो, बाम गठबन्धनले जनतालाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउँछ’ : गोकुल बाँस्कोटा – NamoBuddha Khabar
‘अधिनायकवाद स्याल हुइँया हो, बाम गठबन्धनले जनतालाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउँछ’ : गोकुल बाँस्कोटा
सोमबार, मंसिर १८, २०७४ | १६:५२:१२ |
वाम गठबन्धन उमेद्वार, काभ्रे प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ तथा केन्द्रीय स्कूल विभाग सदस्य नेकपा (एमाले)
वाम गठवन्धनको तर्फबाट प्रनिधिसभा काभ्रे क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार गोकुल बाँस्कोटा एमाले पार्टी संगठनभित्र प्रखर नेताको रुपमा स्थापित छन् । संगठन निर्माण र पार्टी सञ्चालनका क्रममा कडा रुपले प्रस्तुत हुने उनको स्वभावलाई कतिपय कार्यकर्ताले प्रशंसा गर्दछन् भने कतिले आलोचना । प्राथमिक तहको विद्यार्थी जीवनमा नै उनले कौतुहलतापूर्वक राजनीतिलाई बुझ्न थालेका थिए, जतिबेला ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन चलिरहेको थियो । अध्ययन अघि बढाउँदै र विद्यालय फेरिदैं जाँदा बाँस्कोटामा राजनीतिक चेतना पनि भरिदैं आयो र वामपन्थी गुरुहरुसँगको सहसम्बन्धले उनी वमपन्थी आन्दोलनतिर डोरिए ।
मण्डनदेउपुरको तपेश्वर विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत रहँदा नै अनेरास्ववियु ५ औं को सदस्यता लिएर संगठित भएका बाँस्कोटामा माध्यमिक तहको अध्ययनका लागि कम्युनिस्टको गढ डेडीथुम्का स्कूलमा गएसँगै राजनीतिमा भएको उनको कौतुहलताले गर्दा राजनीतिक चेतना विस्तार हुनपायो । विद्यालय तहमा अध्ययन गर्दा नै भूमिगत रुपमा संगठन निर्माण, जनताको चेतना विस्तार र पञ्चायती दमनको विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका वाँस्कोटाले त्यतिबेलै गरेको बाह्य पुस्तकहरुको अध्ययनबाट आफूलाई निखार्दै ल्याएका थिए ।
डेडिथुम्कामा अखिल, रेडक्रस र पुस्तकालयको अध्यक्ष भएदेखि नै उनी राजनीतिमा देखिएरै लागेका हुन् । भूमिगत कालमा पर्चा ओसार्नका लागि उनी निकै चतुर र निपुण मानिन्थे । आन्दोलनका क्रममा पुलिस प्रशासनलाई समेत झुक्याएर हेलेन शाहकै गाडीमा उनले पर्चा ओसारेको रोचक घटना समेत छ । यो उनको जीवनमा अविष्मरणीय पनि छ । अखिल र एमाले काभ्रेको विभिन्न तहमा रही नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका बाँस्कोटा हाल ३ नम्बर प्रदेश कमिटी र पार्टी केन्द्रीय स्कुल विभागका सदस्य रहेका छन् । पत्रकारितामा स्नातक गरेका वाँस्कोटा हालको मण्डन नगरपालिका वडा नं. ४ नयाँ गाउँ चैनपुरका स्थायी बासिन्दा हुन् । विसं २०२७ सालमा बुबा हरिप्रसाद र आमा बालकुमारीको कोखबाट कान्छो छोराको रुपमा उनको जन्म भएको थियो । काभ्रेको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ का लागि वाम गठबन्धनबाट उमेद्वारी दिएका बाँस्कोटासँग वाम गठबन्धन र चुनावी सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
० वाम गठबन्धनसँगै ठूला दलहरुको अगुवाईमा ध्रुवीकरण भइरहेको सन्दर्भमा वाम गठबन्धनको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
– यो गठबन्धन दुईवटा पार्टीको अध्यक्षहरुले चिया खाँदा लहडमा गरेको गठबन्धन होइन । एउटा पीडादायी अवस्था नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका थिए । खासगरी जबजलाई मदन भण्डारीले अगाडि सारिसकेपछि त्यसको लाइट र हाइटमा नेपालको राजनीति यसै पनि धु्रवीकृत थियो । वामपन्थीहरुको लोकप्रियतासँगै स्वभाविक रुपमा जनअनुमोदित भएर वामपन्थी शक्तिहरु राज्य सरकारमा पुग्न सक्दछन् । क्रान्ति पूर्वका सरकार सञ्चालन गर्न सक्दछन् । त्यसमा आफ्ना अनुभवहरु हासिल गर्न सक्दछन् । योग्यताहरु प्रदर्शन गर्न सक्दछन् । त्यसको पुष्टि भइसकेको छ । यो एउटा विश्वव्यापी मान्यताभित्र हामी जानु पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा जुन कुरा आयो त्यसबाट धेरै राम्रो पनि भएको छ । धु्रवीकरणलाई अगाडि बढाउने कुरा यही नै हो ।
अर्को कुरा एउटा खास अवधिमा माओवादी द्वन्द्वमा सामेल भए पनि उसले पछिल्लो अवधिमा शान्ति रोजेको हो । किनभने शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति भयो । त्यसपछि उसँग पनि जनतालाई सेवा गर्ने अर्को कुनै टुल्स थिएन । थियो भने त्यो ब्यालेट नै थियो । त्यसैले जब व्यालेटको कुरा आएपछि एउटा विचार समुह, वैचारिक सैद्धान्तिक र दार्शनिक मान्यता बोक्ने राजनीतिक शक्तिहरुको मत किन विभाजित हुने ? जबकी निर्वाचनमार्फत नै जनतालाई सेवा गर्ने, देशको प्रगतिको खाका तयार गर्ने, समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली भएको देश बनाउने, राष्ट्रिय आत्मासम्मानलाई अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय सहिष्णुतालाई थप व्यापक बनाउने, र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रसँग हामीले सम्बन्ध कायम गर्ने र हाम्रो आफ्नो मर्यादालाई झुक्न नदिने जुन सोचाई हो त्यसैका आधारमा यो गठबन्धन भएको हो ।
जहाँ भूगोल र जनता छन् त्यहाँ यो कुरा हुन्छ नै । त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा २ वटा दर्शको उदार पूँजीवादी अर्थतन्त्र पूरै निजीकरण, पूरै विश्वव्यापीकरणको दिशामा मात्रै जाने कि राज्यको पनि खासखास विषयमा दायित्व पूरा गर्ने ? जनता र राष्ट्रप्रति । राज्यले व्यापार नियन्त्रण गर्ने वा व्यापार नियन्त्रण नगरे पनि यसलाई स्वछन्दतातर्फ जान नदिने ? उद्योग, वाणिज्य र व्यापार सबै कुरामा उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, त्यसको समान वितरणका प्रश्नहरुमा स्वभाविक रुपमा उदारवादीहरु र समाजवादीहरु बीचमा आर्थिक भिन्नता छन् । खासगरीकन राजनीतिक, आर्थिक, सम्बन्धहरुले नै मुलुकको राजनीतिक उपरिसंरचना ढाँचा, राजनीतिक व्यवस्था निर्धारण गर्दछ । त्यसैले यो एउटा विन्दुमा आइसकेपछि अलगथलग जानु आवश्यक छैन । वामगठबन्धनका विषयमा मेरो बुझाई यही हो ।
० त्यसो भए अब तपाईहरु वाम गठबन्धन बनाएर निर्माणतिर लाग्न खोज्नु भएको हो ?
अवश्य पनि । हिजो युद्धका पीडादायी अवस्था पनि छन् । त्यसले सिङ्गै नेपाल राष्ट्रलाई कतिवर्ष पछाडि पा¥यो । त्यो उचित थियो थिएन ? त्यसले केही उपलब्धी ग¥यो कि गरेन ? यी तपशीलका विषय हुन् । तर नेपालमा अभिव्यक्त भएको झण्डै ६०/६२ प्रतिशत जनमत चाहिं अब निर्माणतिर लाग्नुपर्छ भन्ने छ । खुट्टा तान्नेतिर हैन । एकीकृत शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र आफ्नो उद्देश्यमा लाग्नुपर्छ । अब वाम गठबन्धन निर्माणमा जुटेर जनतालाई समृद्धिको यात्रामा हिंडाउनका लागि नै यो गठवन्धन भएको अर्थमा बुझ्दा हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले चलाएको सरकार त्यसले पाएको अवसर र योग्यताहरु, त्यसका नीतिहरु, कार्यक्रमहरु जनताले देखिसके । र कम्युनिस्टहरु खासगरी मनमोहनको नौं महिने सरकार र केपी ओलीको नौ महिने सरकार पनि जनताले हेरेकै छन् । नेपालको राजनीतिमा यो सर्वाधिक चर्चा र महत्वका विषय भएका छन् । जनतामा अलिकति आशावादको सञ्चार यिनै सरकारबाट भएको थियो । अलिकति राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको र हामी केही गर्न सक्छौं भन्ने खालको अवस्थाको सिर्जना गरेको थियो । जनताले अब तुलना गरेर निर्णय गर्ने दिन आएको छ ।
० तपाईहरुको एकताले त कतिपय साथीहरु अवसरबाट धकेलिने भए नी ?
एकताले कसैलाई पनि वितृष्णा हुनुहुँदैन । हाम्रो देशले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो मानसिकता विकसित भएको बेला पनि वामपन्थीको नेतृत्वमा भएको सरकारले आशा जगाएको थियो । हामीले समृद्धि चाहेका छौं । यस्तो बेला न नेता कार्यकर्ता दुःखी हुने कुरा आउँछ न जनता नै । अवश्य नै यो एकताले कतिपय योगदान गरेको साथीहरु यो पटकको निर्वाचनको मैदानमा मुखैमा पुगेर पनि ब्याक हुुनुप¥यो । त्यसका पीडाहरु होलान् तर यी व्यक्तिगत पीडाहरु हुन् किनभने मान्छेहरुले जीवन पनि दिएका छन्, यही आन्दोलनको निम्ति । जीवन दिएको मूल्यमा पद त्याग भनेको चाहिं सामान्य बलिदानी मात्रै हो । त्यसैले यो वाम एकतालाई थप संस्थागत गर्नुपर्छ । यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ र यसको लोकतान्त्रिक विकास पनि गर्नुपर्छ ।
० तपाईहरु समाजवाद प्राप्तिका लागि भन्नुहुन्छ, तर तपाईहरुलाई अधिनायकवाद र तानाशाही लाद्ने शक्तिको रुपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ के भन्नुहुन्छ ?
हो वाम गठबन्धनलाई कैयौं प्रश्नहरु उठाएका छन्, कि अब अधिनायकवाद आउने भो । एकदलीयता हुने भो । अबचाहिं हाँस्न पनि नपाइने भइयो । यसखालको स्याल हुँइया पनि मच्चिएको छ । यो अयोग्यहरुले गर्ने प्रदर्शन हो । मेरो स्पष्ट भनाई छ, कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मदेखि नै यसको घोषणापत्रको पहिलो अनुच्छेददेखि नै नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा सर्वाधिक अमूल्य स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख छ । त्यसैले त्यसको अक्षुष्णता, त्यसको रक्षा, त्यसको महत्वलाई कम्युनिस्टहरुले जति कसैले पनि बुझेको छैन । वामपन्थीले जति कसैले
‘हो वाम गठबन्धनलाई कैयौं प्रश्नहरु उठाएका छन्, कि अब अधिनायकवाद आउने भो । एकदलीयता हुने भो । अबचाहिं हाँस्न पनि नपाइने भइयो । यसखालको स्याल हुँइया पनि मच्चिएको छ । यो अयोग्यहरुले गर्ने प्रदर्शन हो । मेरो स्पष्ट भनाई छ, कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मदेखि नै यसको घोषणापत्रको पहिलो अनुच्छेददेखि नै नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा सर्वाधिक अमूल्य स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख छ ।’
पनि बुझेको छैन । त्यसैले त्यसको संरक्षण पनि गरिनु पर्छ । आफ्नो मौलिकतामा विकास पनि गरिनु पर्छ । हामी फोटोकपी चाहन्नौं । फेरि हामी उत्तरकोरियाको जस्तो वंशवादमा पनि जान चाहन्नौं र एकदलीयतामा पनि जान चाहन्नौं । बहुलवाद हाम्रो छनौट हो । यो हाम्रो समाजको चरित्र पनि हो । हाम्रो भाषामा बहुलवाद छ, धर्मसंस्कृतिमा छ, भूगोलमा बहुलवाद छ । त्यसैले यस्तो देशमा बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने, विचारहरुलाई चलखेल गर्न नदिने भन्ने हुँदैन । हो, विचारहरुको बीचमा कम्पिटिशन हुनुपर्दछ । राम्रै राम्रोको बीचमा पनि कम्पिटिशन हुन्छ । यहाँ त नराम्रा र राम्राहरु बीचको प्रतिष्पर्धामा पनि राम्राहरु पछाडि परे । त्यसैले त्यसलाई तोडिदिनु पर्छ । र इतिहासको एउटा नयाँ रचना गर्नुपर्छ ।
बेला ठिक आइपुग्यो भनेर नै यो वामपन्थी एकता भएको हो । र अब यसलाई चुनावी तालमेलको रुपमा मात्रै बुझ्ने र एमाले चाहिं कम्युनिस्ट भएछ भनेर प्रचार गर्ने गरिएको छ । कम्युनिस्ट नै हो एमाले तर त्यस्तो एउटा ¥याडिकल कम्युनिस्ट भने होइन । एमाले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट हो । ००६ सालमा पनि कांग्रेस एक्लैले राणा शासन भगाएको होइन । पञ्चायत पनि कांग्रेस एक्लैले हटाएको होइन । तथ्यहरु आफैं बोल्छ । ०६२÷०६३ को ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति भयो त्यो पनि कांग्रेस एक्लैको बुँतामा भएको होइन । गणतन्त्रको घोषणा नि कांग्रेस एक्लैले गरेको होइन । ऐले जारी भएको संविधान पनि कांगेस एक्लैको नेतृत्व, अगुवाई र विचारमा बनेको संविधान होइन । सम्पूर्ण कुरामा हामी सँगै आएका छौं । लोकतान्त्रिक कम्पिटिशन गर्ने कुरा हो । आफ्नो नीतिको योग्यता र त्यसको परीक्षण गर्ने कुरा हो र जनताको मन जित्ने कुरा हो । त्यसैले यसमा कोकोहोलो मच्चाउने कुुरा गलत हो । भनिएको छ लोकतन्त्र खतरामा पर्छ र अब अधिनायकवाद आउँछ भनेर । वामपन्थतीहरुकै प्रयासबाट तर लोकतन्त्र थप सुदृढ हुनेछ । बरु एउटा कुरा के साँचो हो भने लोकतन्त्रको÷प्रजातन्त्रको हिमायति ठान्ने कांग्रेसचाहिं अब खतरामा पर्नेछ ।
० समानता र सामाजिक न्यायका एजेण्डाहरुलाई गठबन्धनले कसरी सम्बोधन गर्छ त ?
– त्यसका लागि वामगठबन्धन हो । यो अत्यन्त समयसान्दर्भिक मात्रै छैन कि नेपाल राष्ट्रको प्रगति, समानता र सामाजिक न्यायका लागि नै यसप्रति नेपाली जनताले खुसी व्यक्त गरेका छन् । नेपाली जनताले वास्तवमा २००६ सालदेखि उठाउँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न समयमा वर्गेल्लिए पनि अहिले दुर्इ अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा जुन ऐतिकासिक फड्को मारेको छ त्यसले देश विकासको हिसावले सामाजिक, आर्थिक विकास र रुपान्तरण, सामाजिक न्याय सहितको समाजवादको निर्माण यी सम्पूर्ण कुराहरुमा यो एउटा महत्वपूर्ण विषय हो ।
० लोकतन्त्र खतरामा पार्नेछन् वामहरुले भन्दै भ्रम छरिरहेका छन् नी ?
जहाँसम्म समाजवादी व्यवस्थाको विषयमा कांग्रेसबाट आलोचना र टिप्पणी गर्ने काम भएको छ । वहाँहरु मिल्दा सबै कुरा राम्रो हुने । फेरि वहाँहरु नमिलेर अरु मिल्नासाथ लोकतन्त्र खतरामा पर्ने हुँदैन । अब लोकतन्त्र खतरामा होइन, कांग्रेसी कुशासनको अन्त्य हुने भयो । कांग्रेसलाई खतरा त्यसकारणले कि कांग्रेस सत्तामा तत्काल नफर्केने भयो । उसले लामो परीक्षण गुजार्नु पर्ने भयो । किनभने हिजो उसले लामो अवसर प्राप्त ग¥यो । अब नेपाली जनताले उसलाई प्रतिपक्षमा राखेर वामपन्थीहरुको सत्ता उनीहरुको काम कारबाहीको परीक्षण गर्नेछन् । त्यसैले लोकतन्त्रको अन्त्य हुने सम्भावनै छैन । यो वेकारको कुरा हो । र जनताको बहुदलीय जनवादले त यति महत्वपूर्ण कुरा उठाएको छ कि विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपूर्ण समाज यी सबै कुराहरु विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्रका विषयहरु पनि हुन् । योभन्दा अलगथलग हामी जान पनि सक्दैनौं । आफ्नो कमजोरी लुकाउन र आफ्नो अयोग्यता छोप्न कांग्रेसले चलाएको अफवाह मात्र हो । त्यसको भ्रममा नेपाली जनता पर्दछन् भन्ने पनि लाग्दैन । किनभने यो २१ शताब्दीको चेतना हो । अहिले हरेक १६ वर्षको मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि देशमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ।
‘जहाँसम्म समाजवादी व्यवस्थाको विषयमा कांग्रेसबाट आलोचना र टिप्पणी गर्ने काम भएको छ । वहाँहरु मिल्दा सबै कुरा राम्रो हुने । फेरि वहाँहरु नमिलेर अरु मिल्नासाथ लोकतन्त्र खतरामा पर्ने हुँदैन । अब लोकतन्त्र खतरामा होइन, कांग्रेसी कुशासनको अन्त्य हुने भयो । कांग्रेसलाई खतरा त्यसकारणले कि कांग्रेस सत्तामा तत्काल नफर्केने भयो । उसले लामो परीक्षण गुजार्नु पर्ने भयो ।’
हरेक बुढापाकहरुलाई थाहा छ देशमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा । त्यसैले यो चेतना ००७ सालको चेतना होइन । यो ०४६ सालको चेतना पनि होइन कि कम्युनिस्ट आए भने लाइन लगाएर गोली हान्छन्, लाइन लगाएर भात खुवाउँछन्, दिदीबहिनी भन्न दिंदैनन् । यो सब फतुर सावित भइसक्यो । बरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु, विकास निर्माणका अभियानहरु भएका छन् ।
० अहिलेको वाम गठबन्धनलाई वामहरुले प्राप्त गरेको मत परिणाम र उत्तरतिरले मिलाई दिएको भन्छन् नि ?
– एउटा कुरो स्पष्ट भन्नु पर्छ कि नेकपा एमाले प्रो चाइनिज होइन र प्रो इण्डियन पनि होइन । यो प्रो नेपाली हो । प्रो नेपालीहरुको पार्टी हो । हो जिओ पोलिटिक्सले गर्दा हामीले दुवै देशहरुसँग सम्बन्ध राख्नु पर्छ । पारस्परिक लाभहरु लिनुपर्छ । एकदोस्रोले प्राप्त गरेको सफलताहरु छिमेकीहरुले पनि पाउनुपर्छ । र हरेक संसारका धनी राज्यहरुको दायित्व छेउमा गरिबी पालेर उनीहरुको पनि हित रक्षा हुन सक्दैन । यो उनीहरुले पनि बुझ्नुपर्छ । एमाले सबैलाई सिसमहलमा अगाडि सार वा महलहरुको निर्माण गर भन्छ । त्यसैले यो कांग्रेसी कोणबाट उठाएको कुरा हो । हाम्रो चुनावी तालमेल मात्रै होइन । यो पार्टी एकतामा गएर अनुदित र रुपान्तरित हुन्छ ।
० मत परिणामले गर्दा एकता भएको होइन त्यसो भए ?
– मत परिणाम त बदल्लिरहन्छ । त्यो सत्य हो । जनता कसैका पनि पेवा हुँदैनन् र दास पनि हुँदैनन् । जनताले आफ्नो फैसला आफैं गर्दछ । त्यसैले अहिले मत झन् बढोत्तरी भएको छ । स्वभाविक देखिएको छ । फेरि मत कामहरुद्वारा सिर्जित हुन्छन् । मत त्यतिकै बन्दैन । अमूल्य मतदान भन्छन् नि दिएपछि सक्कियो । यसको कुनै करारनामा हुँदैन । त्यसपछि करेक्शन गर्नुछ भने त ५ वर्ष कुर्नुप¥यो । त्यसैले मत पनि राम्रो छ । हामीले मतको मात्रै हिसाब गरेको होइन, हामीले हाम्रो युग र नेतृत्वको हिसाब गरेको हो । हाम्रो समाजको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको, हाम्रो गरिबीको सँदाको अन्त्यको सपना सहित उद्देश्य सहित यो एकता भएको हो । के को मतको मात्रै हिसाब गर्नु ?
‘जनता कसैका पनि पेवा हुँदैनन् र दास पनि हुँदैनन् । जनताले आफ्नो फैसला आफैं गर्दछ । त्यसैले अहिले मत झन् बढोत्तरी भएको छ । स्वभाविक देखिएको छ । फेरि मत कामहरुद्वारा सिर्जित हुन्छन् । मत त्यतिकै बन्दैन । अमूल्य मतदान भन्छन् नि दिएपछि सक्कियो । यसको कुनै करारनामा हुँदैन ।’
० चुनावी साँठगाँठ र चुनावी मोर्चा मात्रैको रुपमा लिइएको छ, तपाई एकतासम्म नै जाने भन्नुहुन्छ, ०१९ सालदेखि नै गुटफूट र विभाजनको श्रृङ्खला कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छँदैछ, एकतासम्म नै जान्छ भन्ने त्यस्तो ग्यारेण्टी कसरी गर्न सकिन्छ ?
– ग्यारेण्टी त यही हो । प्रकृया नै शुरु भइसक्यो भने ग्यारेण्टी अब के खोज्ने ? चुनावपछि दुई पार्टीका अध्यक्षहरुले, केन्द्रीय कमिटीद्वारा अनुमोदित भएको ६ बुँदे सम्झौताले के कुरा उल्लेख गरेको छ ? त्यसैमा टेकेर हामी बाँकी सफलता प्राप्त गर्दछौं । एकता हुन्छ र एकता गराउनु पर्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र नेतृत्वले गल्ती ग¥यो भने कार्यकर्ताले करेक्शन गरेको इतिहास छ । ०१७ सालमा केशरजंगले गल्ती नगरेको होइन नी शाही कदमको समर्थन गरेर । कार्यकर्ताले माने त ? जनताले माने त ? विद्रोह भयो । त्यसैले जनताले अब करेक्शन गर्छन् । प्रकृयाबाट जो बाहिर जान खोज्छ त्यो चाहिं चेपुवामा पर्छ । त्यो चाहिं पतनको बाटोमा जान्छ । त्यसैले सानातिना पदीय स्वार्थ, इच्छा र आकांक्षाले यो वामपन्थी एकताको यात्रा बीचैमा अवरुद्ध होला, तितरवितर होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० वाम गठबन्धन सैद्धान्तिक, राजनीतिक र कार्यनीतिक हिसाबले फरक रहेका पार्टीहरुका बीचमा भएको छ, एमाले युरो साम्यवादलाई मान्दछ भने माओवादीले माओवादलाई यही अवस्थामा एकता भएन भने त यो चुनावी मोर्चा मात्रै भएको सावित होला नी ?
– ओ हो, यो युरो कम्युनिजम एमालेले मानेको भन्ने कुरा सोह्रैअना गलत हो । युरो कम्युनिजम फरक कुरा हो, मैले अघि पनि उल्लेख गरेको छु, कुनै पनि देशको राजनीतिक क्रान्ति त्यो देशको आफ्ना मौलिक विशेषताभित्र हुने गर्दछ । त्यसैले क्रान्तिका हामी कतैको फोटोकपी गर्दैनौं । यो गणितको शुत्र जस्तो हुँदैन । आफ्नो मौलिकता, विशेषता र आफ्नो क्षमतामा हुन्छ । त्यसैले यो न युरो कम्युनिजमतिर बरालिन्छ न यो नोकरशाही कम्युनिजम रसियाको जस्तो हुन्छ । न यो वंश कम्युनिस्ट उत्तर कोरियाको जस्तो नै हुन्छ ।
यो त हाम्रो सामाजिक चरित्र र मौलिकतामा हुन्छ । हाम्रा चेतनाहरु र आवश्यकतामा निहित हुन्छ । जहाँसम्म दुई फरक हुन् भन्ने कुरा छ, त्यो पृष्ठभूमि फरक हो । हामी शसस्त्र आन्दोलनलाई पूरै छाडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो रोजेर वामपन्थीहरुलाई धु्रवीकृत गर्दै आउँदै थियौं, ०२८ सालको झापा विद्रोहपछि । जनपरिचालन र जनताको बलद्वारा अगाडि बढ्नुपर्छ । जनता सहभागी भएको आन्दोलन र क्रान्तिको मात्रै दिगोपना हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका थियौं ।
‘प्रकारान्तरले जब हतियारहरु विसाइए तब राजतन्त्र अन्त्य भयो । वामपन्थीहरु एकै ठाउँमा उभिनु प¥यो । कथित लोकतन्त्रवादीहरु पनि त्यही कित्तामा उभिनु प¥यो र गणतन्त्र स्थापना भयो । यो त सबैको साझा उपलब्धी हो नि । त्यसो भएकाले अब हामी पुराना के थियो भने कोट्याएर जाँदैनौं । गणतन्त्रको विन्दुमा टेकेर यसलाई थप सुदृढ गर्ने कार्यान्वयनको चरणमा गएर अझ उन्नत समाजतर्फ, उन्नत आर्थिक व्यवस्थातर्फ हामी जाने बाटो खोज्छौं । पश्चगामी बाटोतर्फ अब हामी मुण्टो फर्काएर पनि हेर्दैनौं ।’
माओवादी साथीहरुले त्यसो नगरी माओकालिन राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनबाट जनयुद्ध चलाउनु भएको थियो । प्रकारान्तरले के सही सावित भयो भने नेपालका आन्दोलनहरुमा कृष्णलालले एउटा मकैको खेती पुस्तक निकाल्दा राणा शासनको पतनको दिन शुरु भएको थियो । ४ जना मान्छे मार्दा राणा शासन ढल्यो । २५ जना मान्छे मर्दा राजतन्त्र ढल्यो । त्यसैगरी पञ्चायत ढलेको थियो । त्यसैले जनता साथमा भएको आन्दोलनभित्र हामीले नयाँ प्रकाश खोज्यौं । उज्यालो र नयाँ बाटो खोज्यौं । साथीहरुले अलिपछिसम्म नै त्यो कुरालाई महसुस गर्नुभएन । प्रकारान्तरले जब हतियारहरु विसाइए तब राजतन्त्र अन्त्य भयो । वामपन्थीहरु एकै ठाउँमा उभिनु प¥यो । कथित लोकतन्त्रवादीहरु पनि त्यही कित्तामा उभिनु प¥यो र गणतन्त्र स्थापना भयो । यो त सबैको साझा उपलब्धी हो नी । त्यसो भएकाले अब हामी पुराना के थियो भने कोट्याएर जाँदैनौं । गणतन्त्रको विन्दुमा टेकेर यसलाई थप सुदृढ गर्ने कार्यान्वयनको चरणमा गएर अझ उन्नत समाजतर्फ, उन्नत आर्थिक व्यवस्थातर्फ हामी जाने बाटो खोज्छौं । पश्चगामी बाटोतर्फ अब हामी मुण्टो फर्काएर पनि हेर्दैनौं ।
त्यसैले दुई कम्युनिस्ट पार्टी फरक फरक भए पनि २१ औं शताब्दीको जनवाद माओवादीले उठाएको कुरा हो र २० वर्ष पहिले नै मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा, सिद्धान्त र कार्यक्रम सबै अगाडि बढाइसक्नु भएको थियो र त्यसको व्यापकता पनि छ । फेरि यी कुनै पनि विचारहरु धर्मशास्त्र होइनन् कि यसमा समयानुकुल परिवर्तन गर्न नसकियोस । अपग्रेट गर्न नसक्ने र विकसित गर्न नसक्ने होइन । हामीले पनि भन्दै आएका छौं जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षा, प्रयोग र विकास । त्यसैगरी माओवादीको २१ औं शताब्दीको जनवादको रक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन मलाई थाहा छैन तर प्रयोग र विकासका के–के अनुभवहरु निस्के ? त्यसआधारमा यसलाई एकोमेडेट गर्नुपर्छ । समायोजन गर्नुपर्छ । र त्यसको माध्यमबाट क्रान्तिकारी चरित्र, उद्देश्य र ध्येयका साथ संगठनात्मक ढाँचामा दायाँ र बायाँ कुनै कोणमा नगईकन माक्र्सवादी दर्शनकै आधारमा एकताको प्रकृया साङ्ठानिक विषयवस्तुको निरुपण हुन्छन् । सबैकुरा त्यसैगरी जानेछन् ।
त्यसैले यसमा शंका गरिराख्नु पर्दैन । एकता हुन्न भन्ने कुरा कल्पनामा मात्रै सीमित हुन्छ, यो धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यसको मूर्तिकरण भइसकेको छ । संयोजन समितिहरु बनिसकेका छन् । आकार लिइसकेको छ । चुनावमा साझा उमेद्वारहरु बनिसके । प्राविधिक कारणले हामीले चुनाव चिन्ह मात्रै फरक फरक लिएका छौं । अन्तरघुलित हुने प्रकृया तीब्र भइरहेको छ । अब नेतृत्वले वेइमानी गर्न खोजे भने पनि कार्यकर्ताले मिलाउनेछन् ।
० त्यसो भए गठबन्धनबाट हौसिएका समुदायहरु निराश हुने दिन आउँदैन ?
– आउँदैन । बरु त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वनका लागि जनताले पनि अभिप्रेरित र खबरदारी गर्नुपर्छ । आफ्नो जीवनको खुसीयालीका लागि ।
० तपाईहरुको गठबन्धनबाट स्थिरता कायम गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा गुणात्मक फड्को मार्ने ग्यारेण्टी छ ?
– हो, यही कुरा गर्न हामीले वाम एकता गरेको । नेपालमा ९\_९ महिनामा सरकार बन्ने र ढल्ले कुराले हाम्रो जस्तो अविकसित देशको समयको वर्वादी मात्रै गरायो । प्रशासन संयन्त्र अस्थिर भयो । नीतिहरु अस्थिर भए । जसले गर्दा विकासले गति लिएन । त्यसैले यसलाई स्थायित्व, शान्ति, विकास, समुन्नती, अग्रगति र संवृद्धिको यात्राका लागि यो वाम एकता हो ।
समाजवाद संविधानमा लेखिएको कुरा हो । व्याख्या आ–आफ्नो गरौं । हामी न्याय सहितको समाजवाद, सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद, आर्थिक प्रगति सहितको समाजवाद चाहन्छौं । खोक्रो होइन । राजनीतिक प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली सहितको समाजवादमा जान्छौं । जनतालाई छनौटको अधिकार सुरक्षित र अक्षुष्ण राखेर हामी समाजवादको कार्यान्वयनतर्फ जानेछौं ।
० वाम गठबन्धनले अग्रगामी राजनीतिक हल दिएर दुरगामी प्रभाव छाड्छ ?
– स्वभाविक छ, हेर्दै जानुहोला किनभने धेरै प्रेडिक्सन गर्नु राम्रो हुँदैन ।
० संविधानमा विवादित विषयहरु पनि यथावत नै छन् नि, समानता र सामाजिक न्यायलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, वाम गठबन्धनबाट ?
– यो विवाद नेपालमा थिएन । नेपाली जनतामा थिएन । अरु कसैले विवाद थोपरिदिएको थियो । त्यसका एजेण्डाहरु विवादित छन् भने हिंडेका थिए । ती सबै चुनावमा आएपछि बुझ्नुपर्छ कि संविधानलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । अब यसको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कतैकतै गल्ती देखिए यसको समयानुकुल परिवर्तन र शंसोधन यसको ऐजेण्डा बनेर जानेछ ।
० दलीय धु्रवीकरणले दुई दलीय पद्दती ल्याउला जस्तो छ नी ?
– त्यो हामीले चाहेकै कुरा हो । हाम्रो शुभकामना छ । जसरी विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोण विकासका मोडेलहरु समेतल मिल्ने राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा धु्रवीकृत हुँदैछन् । अरु पनि त्यस्ता दलहरु एकै स्थानमा आउनुपर्छ । जनतालाई पनि झण्झट भएन र देशले पनि एउटा निकास पाउनेछ । त्यसैले प्रतिष्पर्धा पनि स्वस्थ, मर्यादित र रोमाञ्चित हुने भयो । हाम्रा प्रतिद्वन्दीहरुलाई पनि हाम्रो शुभकामना छ, लोकतान्त्रिक भन्नेहरुलाई हाम्रो सुझाव छ, रोदनतिर अब नलागौं बरु मिलाउनतिर लाग ।
० सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल भन्नुहुन्छ तपाईहरुका काभ्रेलाई समृद्ध बनाउने योजना चाहिं के छन् ?
–भरखरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले स्थानीय जनताका आधारभूत आवश्यकता तर्फका कुराहरुलाई बढी जोड दिएका छौं । तर हाम्रो देश समृद्ध हुने कुरा के हो ? देशको स्रोत साधनको अविलम्ब परिचालन नै हो । पूँजीको संकलन, प्रविधिको आयात वा विकास, उत्पादन र बजारीकरण यो बाटो हामीले तय गर्ने हो । हामीसित उर्वर फाँटहरु छन् । तर सिंचाई पु¥याउन सकिएको छैन । त्यसमा हामीले सिंचाईको प्रवन्ध गर्ने, हामीसँग सुन्दर डाँडाकाँडाहरु छन् त्यसमा हाम्रो पर्यटनको सम्भाव्यता खोजी गर्ने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र राज्य आफैंले पनि केही गर्न सक्छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउने, व्यवसायीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने हो ।
हामीसँग जल, जमिन, जंगल जे छ त्यसको पहिलो विकास गर्नुप¥यो । कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै हुने होइन कि कृषिमा आधारित उद्योततर्फ पनि नेपाल जानु प¥यो । हामीसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नाका पनि छ, कोदारी राजमार्ग । विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाललाई बनाउने भन्ने कुरा चलेको धेरै भयो । जमिन पनि छुट्याइएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यति मात्रै होइन पाँचखालमा तेलको रिजर्भ ट्याङ्की राख्ने कुरा छ, नाकाबन्दीकै बेलामा देशका ६÷७ स्थानमा राख्ने भनिएको थियो । हामीले आलुको सुपरजोनको कुरा गरेका छौं । हाम्रो काभ्रे त्यसमा पनि छनौट भएको छ ।
आधुनीकीकरण, व्यवसायीकरण गरेर रोजगारी दिएर जनताको आम्दानी बढाउने छौं । फलफूलको के हुनसक्छ, कृषि, पशुजन्य उत्पादन के हुनसक्छ ? यसको अतिरिक्त जनश्रोतको के हुनसक्छ । इन्द्रावती र सुनकोशी हाम्रो भाग भएर जोडिएर बग्छ यहाँ हामी के गर्न सक्दछौं । के सम्भावना छ ? त्यसैले काभ्रेको विकास पनि कृषि, पशुपालन, पर्यटन र सेवा उद्योगहरु हुनसक्छन्, हामीसँग हस्पिटलहरु छन्, युनिभर्सिटी छ, त्यसमा हाम्रो पहुँच कति ? अरु शैक्षिक विकासका लागि के के गर्न सकिन्छ । यिनै विषयहरु हुन् हामीले काभ्रेलाई समृद्ध बनाउने भनेको । समृद्ध भनेको हामीले गरेरै हुने हो । अमेरिका त्यसै अमेरिका भएको होइन, उनीहरुले अमेरिका बनाएरै समृद्ध भएको हो । जापानीज र कोरियनहरुले मेहनत गरेर बनाएका हुन् । तिनीहरु पनि कुनैबेला पछाडि नै थिए । हामीसँग पनि उनीहरुको जस्तो सबै चिज छन् र मेहनत गर्न तयार जनशक्ति पनि छ ।
‘हामीसँग जल, जमिन, जंगल जे छ त्यसको पहिलो विकास गर्नुप¥यो । कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै हुने होइन कि कृषिमा आधारित उद्योततर्फ पनि नेपाल जानु प¥यो । हामीसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नाका पनि छ, कोदारी राजमार्ग । विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाललाई बनाउने भन्ने कुरा चलेको धेरै भयो । जमिन पनि छुट्याइएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यति मात्रै होइन पाँचखालमा तेलको रिजर्भ ट्याङ्की राख्ने कुरा छ, नाकाबन्दीकै बेलामा देशका ६÷७ स्थानमा राख्ने भनिएको थियो । हामीले आलुको सुपरजोनको कुरा गरेका छौं । हाम्रो काभ्रे त्यसमा पनि छनौट भएको छ ।’
तीन करोड जनसंख्या नभएको देशका ६० लाख त विदेशमा छन् । यहाँ काम नभएर नै त्यहाँ गएको हो । उनीहरुले दुःखका साथ मेहनत गरिरहेका छन् । त्यसले आफ्नै देशमा पनि मेहनत गर्न सक्छ । अर्को कुरा श्रमशक्तिको विकास र श्रमलाई सम्मान गर्ने सँस्कृतिको पनि विकास गर्नुपर्छ, अपहेलना र घृणा गर्ने होइन । उत्पादन बढाउन लाग्ने हो । नत्र त किनेर मात्रै कति सक्छौं त ? देश बनाउने उत्प्रेरणा, जागरण भन्छन् नि त्यस्तै गर्नुपर्छ जसरी सिंगापुरेहरुले बनाए । एउटा समुन्द्रबाहेक के थियो उनीहरुसँग ? त्यसलाई उपयोग गरी सेवा उद्योग र व्यापारको केन्द्र बनाए । त्यसैगरी हामीले हामीसँग भएको साधन र श्रोतको समुचित परिचालन र लागनीतर्फ लाग्नुपर्छ । यो लगानी सबैले गर्नसक्छन्, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्नुप¥यो महत्वपूर्ण कुरा यही नै हो । यसबाटै समृद्धि हाँसिल गर्ने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि हामी लिन्छौं । तर अनुचित सर्तहरु चाँही स्वीकार गर्दैनौं ।
० वाम गठबन्धनले काभ्रेलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ ?
– हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं यस विषयमा । जस्तो आइटीपार्क बनेको छ । त्यो उपयोगमा आएको छैन । त्यो चल्नुपथ्र्यो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ३ पटक बैठक राखेर प्रयास गरे तर त्यसपछि भएन । केले नभएको ? हाम्रो सडक सानो भएर हो या मानिसहरुको आउनेजाने नभएर हो ? कि अनुपयुक्त थियो कि ? के हो त ? त्यसको पनि उपयोग गर्नुपर्छ । धुलिखेलक कार्यालयहरु खाली हुनेछन् । त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ठाउँ पनि सुन्दर छ । यो प्रदेशमा पर्ने पूर्वका पाँचवटा जिल्लाको लागि सबभन्दा पाएक पर्ने व्यापारिक केन्द्र र यातायातको कनेक्सन भएको जिल्ला हो । भ्याली साँघुरो र प्रदुषण पनि भयो । निर्माण पनि महङ्गो पर्न जान्छ । किनेर बनाउँदा जमिन पनि महङ्गो पर्नजान्छ । किन्ने नै हो भने पनि काभ्रे नै सस्तो पर्छ । राज्यको सार्वजनिक सम्पतिहरु छन् भने त्यसलाई पनि उपयोग गरेर जान सकिन्छ । काभ्रे नै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त सबै पार्टीहरु सहमत छन् र हुनपर्छ । वाम गठबन्धनको विजयपछि हामी अवश्य पनि काभ्रेलाई प्रदेशको राजनधानी बनाउँन सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।